လက်ျာဘက်ရွေးချယ်ခြင်း စီအိုင်အေလေ့လာမှုပစ္စည်းများ သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရပြည်တွင်းစာရင်းစစ်ချုပ်ဖြစ်လာဆီသို့ဦးတည်သင့်ရဲ့ခရီးအပေါ်စေမည်ကြင်ဖော်မဲ့အရေးအပါဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီတော့ဒီမှာသတငျးကောငျးရဲ့ - သငျရန်မလိုပါဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစျေးကွက်အပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းစီအိုင်အေပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကိုစုံစမ်း demoed ပါပြီ! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားနှိုင်းယှဉ်လျှင်အသင့်တော်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီပြီးသောတဦးတည်းထွက်တွက်ဆကူညီပေးပါမည်.
ထုတ်ဖော်: အောက်ကလင့်ခ်အချို့ကို Affiliate လင့်များဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, နှင့် သငျသညျမရှိအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာ, သငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦးသင်တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်ငါလွှဲပြောင်းကြေးရရှိမည်. သငျသညျငါသည်သင်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းဆုံးဖြတ်ချက်၌သင်တို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့ကြပါပြီဟုခံစားရလျှင်သာငါ၏အလင့်များကိုသုံးပါ ကျေးဇူးပြု..
ထိပ်တန်း5အကောင်းဆုံးစီအိုင်အေလေ့လာမှုပစ္စည်းများ 2018
စာမေးပွဲ Matrix စီအိုင်အေ့ Prep သင်တန်းအမှတ်စဥ်
ကုမ္ပဏီ Gryfina စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း စာမေးပွဲ Matrix စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Wiley စီအိုင်အေ Excel ကိုစာမေးပွဲ အင်အားကြီးအရင်းအမြစ်များစီအိုင်အေ HOCK အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီအိုင်အေ
အဆင့် #1 #2 #3 #4 #5
စျေးနှုန်းကို $427 $499 $375 $495 $814
အခမဲ့စမ်းသပ် အဘယ်သူမျှမ အခမဲ့ Demo 48 hours 20 နေ့ရက်များ အခမဲ့နမူနာ
အလေ့အကျင့်ရှိသောမေးခွန်းများ 2,000+ 2,000+ 5300+ 3700+ 2,919
ဝင်ရောက်ခွင့် 12 လပေါင်းများစွာ 18 လပေါင်းများစွာ 12 လပေါင်းများစွာ 18 လပေါင်းများစွာ Unlimited
ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု အီးမေးလ်က ဖုန်းနံပါတ်, အီးမေးလ်က, chat အီးမေးလ်က ပံ့ပိုးမှုအသင်း Tech မှထောက်ခံကြောင်း
အကောင်းဆုံး Value ကို အကောင်းဆုံးနည်းပညာ လေ့လာမှုလမ်းညွှန်နှင့်သတ်မှတ်ထားမှတ်စုအာရုံစိုက် ပို 2800 E-စာလုံးကတ်, ဖတ်စာအုပ်နှင့်လှောင်ပြောင်စာမေးပွဲဖြေဆို Videos မ, E-flash ကိုကတ်များ, စာအုပ်
Started Get NOW က START NOW က START NOW က START NOW က START NOW က START
Gryfin ရဲ့စမတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့တိကျတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့အဖြေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်, Gryfin အားနည်းခြင်း၏သင့်ဒေသများအပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့စိတ်ကြိုက် program ကိုတညျဆောကျနိုငျသညျ. ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်သာပိုပြီးပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သောအားနည်းသောဒေသများတွင်ပစ်မှတ်ထားဒါလေ့လာနေဖြစ်စဉ်ကိုချောမွေ့ရန်ဖြစ်ပါသည်.
အဲဒီအစားတအရွယ်အစား-ကိုက်ညီတဲ့-အားလုံးချဉ်းကပ်၏, Gryfin စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင့်ရဲ့သင်ယူမှုစတိုင်ဖို့သင်တန်း tailors. လေ့လာရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခု၌ဤပစ်မှတ်ထားရလဒ်များကို. သင်ပြီးသားကျွမ်းကျင်တော့ပစ္စည်းမကူးမသွားမည်ဆိုအချိန်မဖြုန်းတီးကြဘူးဒါသပ္ပါယ်ဆော့ဝဲမလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များနှင့်မလိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုကွာ trims.
ယင်း၏သပ္ပါယ်သင်ယူမှု software ကိုအပေါ် Gryfin ယုံကြည်မှုဟာသူ့ရဲ့ pass သို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒမှထငျရှား. သငျသညျတခုလုံးအတွက်၎င်း၏သင်တန်းကိုသုံးပါနှင့်သည်းမထားဘူးဆိုရင်, ကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံပြန်အမ်းလိမ့်မယ်. သို့သော်ဤ option အချို့ဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်.
မသာ Gryfin စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတစ် Pass ကိုသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေအာမခံပူဇော်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းကထောက်ပံ့ 50% လျှော့စျေးကိုသင်သင်တန်းပြန်လည်ယူရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သက်တမ်းကုန်သွားပြီပြီးနောက်.
Gryfin ၏ web design မှာအသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်စမ်းသပ်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန်ပိုပြီးထိရောက်စေသည်. အဆိုပါဒိုင်ခွက်တစ်ခုလုံးကို site ကိုအသုံးမပြုနိုင်စေကူညီပေးသည်နှင့်ကသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်အဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့လမ်းညွှန်. တစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းသားများအတွက်တီထွင်စိတ်ကြိုက်လေ့လာနေဖြစ်စဉ်ကိုစမ်းသပ် takers အမျိုးမျိုးမှဆွဲဆောင်ဒီသင်တန်းကို. တိုင်းလေ့လာမှု session ကိုသင်တန်း personalize ကူညီပေးပါမည်, လွယ်ကူသင်အသုံးပြုရန်အဘို့အအောင်.
ဒါဟာသင့်ရဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်ရက်စွဲအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ပစ္စည်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်အမိန့်နှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်လေ့လာဖို့ရန်လိုအပ်မည်မျှနာရီတွက်ချက်ကြောင်း Gryfin များတွင်အသုံးပြုကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့စာမေးပွဲများ၏ရက်စွဲကို input ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသငျသညျကိုလေ့လာနိုငျရာရက်ပေါင်း, ပြီးတော့ Gryfin သင့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုမဟာဗျူဟာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျစီအိုင်အေစာမေးပွဲအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသင်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်မည်မျှနာရီနေ့၏အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်. ဒါဟာသင်လေ့လာမှုအချိန် PACE သွားဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ထွက်ရှာဖွေ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်အလေးပေးရှောင်ရှားကူညီပေးပါမည်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ပြင်ဆင်နေမှကြွလာသောအခါအဆိုပါလျော့နည်းခေါင်းကိုက်ပိုကောင်း!
Gryfin ရရှိနိုင်အများဆုံးတတ်နိုင်ပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအနိမ့်သောစျေးနှုန်းသင်တို့အဘို့အလွန်ဆွဲဆောင်မှု option ကိုဖွစျလိမျ့မညျ, တူညီသော features တွေနှင့်အတူအခြားအပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကို Gryfin ပိုနှစ်ကြိမ်ထက်စျေးနှုန်းနိုင်ပါတယ်ကတည်းက.
Gryfin စီအိုင်အေစာမေးပွဲများအတွက်လေ့လာနေဖို့အရေးပါမဟုတ်ကြောင်းတစ်အာရုံပြံ့လှငျ့ထှကျကြာသည်ဟုသန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်မှုကို web ဒီဇိုင်းနှင့်အခြားဒဏ်ဍာရီဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. အဆိုပါဒိုင်ခွက်ရိုးရှင်းနှင့်တစ်ခုလုံးကို site ကိုသင်အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်သောအရာကိုပေါ်တွင်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြုစုပြုံပြွတ်သိပ်နေအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်: စီအိုင်အေစာမေးပွဲဖြတ်သန်း. လေ့လာနေစဉ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြကြသည်အများအပြားသည်အခြားအညွှန်းကိန်းရှိပါသည်သင်ကပါဝင်သည်အစီအစဉ်များနှင့် tools တွေမဆိုရည်ညွှန်းဖို့ရိုးရှင်းတဲ့င်. လူအပေါင်းတို့သည်ခေါင်းလောင်းနှင့်စီများမှုတ်ခြင်းမရှိဘဲ, သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်နှငျ့သငျတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
Gryfin အထူးလျှော့စျေးအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း. လောလောဆယ်, ကကမ်းလှမ်း 12% ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်လျှော့စျေး.
Gryfin စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဝဘ်အခြေပြုဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်ကြောင့်ဗီဒီယိုကို leactures ကိုထောက်ပံ့ပေးမထားဘူး. ကုမ္ပဏီသပ္ပါယ်သင်ယူမှုယုံကြည်သောကတည်းက, Gryfin ပစ္စည်းနှင့်တကွသင်ထောက်ပံ့, ပစ္စည်းကဆိုပါတယ်ပေါ်တွင်သင်၏အသိပညာစမ်းသပ်, ပြီးတော့သင်ပိုမိုအလုပ်လိုအပ်သောအကြောင်းအရာများအားပြန်လည်လမ်းညွှန်.
Gryfin စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများပိုကောင်းအောင်ဖို့သပ္ပါယ်သင်ယူမှုဆော့ဖ်ဝဲအားသာချက်ယူမည်သူ Self-လှုံ့ဆော်မှုသင်ယူသူအဘို့ကြီးစွာသောလျောက်ပတ်သည်. သို့သော်၎င်း၏သပ္ပါယ်သင်ယူမှုစတိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးလူမျိုး၏မျိုးစုံအမျိုးအစားများကိုပိုမိုတန်ဖိုးအားထောက်ပံ့.
Gryfin ကြောင့်၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်ကို web based သင်ယူမှုဖြေရှင်းချက်မှစီအိုင်အေစမ်းသပ် takers အကြားလူကြိုက်များနေသည်. သင့်ရဲ့အားနည်းဒေသများနှင့်သင်ယူမှုစတိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးသူ့ရဲ့စမတ်စိတ်ကြိုက်ကိုလည်းတစ်ဦးလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုကိုအောင်နေသည်. အဆင့်မြင့်ကထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာစီအိုင်အေစမ်းသပ်ပြန်လည်သုံးသပ်စေသည်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအထုပ် features.
NOW က START
စာမေးပွဲ Matrix စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း
စာမေးပွဲ Matrix ရဲ့စမတ် software ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့သည်အခြားစမ်းသပ်မှု prep သင်တန်းများအများအပြားနှင့်အတူအောင်မြင်မှုသက်သေပြခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့စီအိုင်အေလေ့လာမှုပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာအကောင်အထည်ဖော်ကြပါပြီ. အဆိုပါစာမေးပွဲ Matrix software ကိုသင်နှင့်သင့်သင်ယူမှုစတိုင်မှ adapts နှင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိအများဆုံးဒုက္ခရှိသငျသညျမေးခွန်းများကိုပြသ. သင်ပြီးသားကိုသိရန်နှင့်ပိုမြန်လွန်သွားနိုင်သလဲဆိုတာကိုကျော်သွားကြောင်းလမ်း.
စာမေးပွဲ Matrix ထုတ်ဝေထူးခြားဆန်းပြားရှိပါတယ် 80% နှုန်းကိုရှောက်သွား! ဒါဟာသင်တန်းအကြောင်းအရာများအတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကသူတို့ဖြတ်သန်းသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒနှင့်ဆက်လက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်. သငျသညျတခုလုံးအတွက်၎င်း၏သင်တန်းကိုသုံးပါနှင့်သည်းမထားဘူးဆိုရင်, ကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံပြန်အမ်းလိမ့်မယ်. သို့သော်ဤ option အချို့ဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်. အပြည့်အဝအသေးစိတျအဘို့မိမိတို့ website ကိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး.
တစ်လုံးဝအသစ်ကဒီဇိုင်း 2018 တစ်ဦးလေပြေသွားလာစေသည်. ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘယ်အချိန်မှာစာမေးပွဲ Matrix software ကိုအလွယ်ကူဆုံးဆင်းလက်ကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကသွားလာရင်းသင်တို့နေရာနေပါစေလေ့လာဖို့လွယ်ကူစေသည်.
Gryfin ၏ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့တူတာ, စာမေးပွဲ Matrix သင်တို့ရှိသမျှပစ္စည်းကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ရန်အတွက်လေ့လာဖို့လိုတယ်မည်မျှနာရီတွက်ချက်ထားတဲ့စာမေးပွဲနေ့အစီအစဉျထောက်ပံ့. ထို့နောက်သင်သည်သင်၏စာမေးပွဲတွင်နေ့စွဲမတိုင်မီလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်အဘယျသို့ဆုံးဖြတ်သည်. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့စာမေးပွဲများ၏ရက်စွဲကို input ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသငျသညျကိုလေ့လာနိုငျရာရက်ပေါင်း, ပြီးတော့စာမေးပွဲ Matrix သင့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုမဟာဗျူဟာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်.
စာမေးပွဲ Matrix အထူးလျှော့စျေးအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း. လောလောဆယ်, ကကမ်းလှမ်း 15% ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်လျှော့စျေး.
စာမေးပွဲ Matrix စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဝဘ်အခြေပြုဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်ကြောင့်ဗီဒီယိုကိုပို့ချချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမထားဘူး. ကုမ္ပဏီသပ္ပါယ်သင်ယူမှုယုံကြည်သောကတည်းက, စာမေးပွဲ Matrix ပစ္စည်းနှင့်တကွသင်ထောက်ပံ့, ပစ္စည်းကဆိုပါတယ်ပေါ်တွင်သင်၏အသိပညာစမ်းသပ်, ပြီးတော့သင်ပိုမိုအလုပ်လိုအပ်သောအကြောင်းအရာများအားပြန်လည်လမ်းညွှန်.
စာမေးပွဲ Matrix စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများပိုကောင်းအောင်ဖို့သပ္ပါယ်သင်ယူမှုဆော့ဖ်ဝဲအားသာချက်ယူမည်သူ Self-လှုံ့ဆော်မှုသင်ယူသူအဘို့ကြီးစွာသောလျောက်ပတ်သည်. သို့သော်၎င်း၏သပ္ပါယ်သင်ယူမှုစတိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးလူမျိုး၏မျိုးစုံအမျိုးအစားများကိုပိုမိုတန်ဖိုးအားထောက်ပံ့.
စာမေးပွဲ Matrix တစ်သက်သေကုမ္ပဏီနှင့်စမ်းသပ် prep ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါသည်. သူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှဆိတ်ကွယ်ရာကသူတို့ကိုသတ်မှတ်.
Wiley ထက်ပိုပြီးအဘို့စမ်းသပ် prep စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာခဲ့ 40 နှစ်နှင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစာရင်းကိုင်စာမေးပွဲအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကိုဖန်တီးလူသိများသည်. Wiley CIAexcel, ထို့အပြင် Wiley စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအဖြစ်လူသိများ, ဤအစံချိန်စံညွှန်းများအထိနေထိုင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်လေ့လာဖို့နှင့်စီအိုင်အေစာမေးပွဲကူညီရန်အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေး.
အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုယူပြီးစီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်အဘို့ပြင်ဆင်နေ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Wiley စီအိုင်အေန့်အသတ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာပေးသည်, စိတ်ကြိုက်အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ, နှင့်ထက်ပိုတဲ့ငွေရတတ်သောသူစမ်းသပ်ဘဏ်ထံမှစွမ်းဆောင်ရည် analytics 5300 မေးခွန်းများကို. ဒါဟာအစသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်. အဆိုပါ software ကိုတုမူရင်းစီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်အဘို့ကျောင်းသားများကိုပွငျဆငျခွငျးကိုကူညီအမှန်တကယ် Pearson Vue စမ်းသပ်.
iOS အတွက်မိုဘိုင်း App ကို
ယနေ့ခေတ်စမတ်ဖုန်းတွင်ရရှိနိုင်ပစ္စည်းလူကြိုက်များလျက်ရှိသည်ကိုလေ့လာ. Wiley က iPhone နှင့် iPad နှစ်ခုလုံးအတွက် app များကိုဖန်တီးထားပါတယ်. သငျသညျအဓိကသော့ချက်အယူအဆကျည်ဆံအချက်များနှင့်အတူမှတ်ချက်ကတ်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်, တိကျသောအသုံးအနှုန်းများသို့မဟုတ်ကဏ္ဍများကို bookmark, သော့ချက်စာလုံးများအားဖြင့်ရှာဖွေရေး, နှင့်စီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်အပေါငျးတို့သညျသုံးဖွာအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုဖန်တီး. ဒါကသွားလာရင်းသင်ယူခြင်းသည်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်.
Wiley ရဲ့စီအိုင်အေဖတ်စာအုပ်များနှစ်စဉ် updated နေကြတယ်. ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်းအစုတခုလည်းပါဝင်သည်3ဖတ်စာအုပ်များ, စီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်၏အသီးအသီးစိတျအပိုငျးတ. သငျသညျလျှော့စျေးနှုန်းမှာတဦးတည်းစာအုပ်သို့မဟုတ်သုံးဦးစလုံးကိုဝယ်ယူများ၏ option ရှိသည်. အဆိုပါသုံးစာအုပ်တွေသည့်အကြောင်းအရာများအားဖြည့်ကူညီခြင်းနှင့်သင်သဘောတရားများနှင့်အခြေခံမူကျွမ်းကျင်ကူညီရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်. တစ်ခုချင်းစီကိုစာအုပ်ကားချပ်နှင့်ပြည့်စုံသည်, စားပွဲ, သငျသညျပစ္စည်းမှတ်မိကိုကူညီဇယားနဲ့ memory device များ. သငျသညျမျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်းပြီ.
ဤသည်ဖြည့်စွက်ရည်ညွှန်းထားနို့ဆီပုံစံအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုအပေါ်ဖုံးလွှမ်းအရေးကြီးဆုံးလေ့လာမှုပစ္စည်းဖော်ပြထားပါတယ်. Wiley အာရုံစိုက်မှတ်စုများတစ်လိမ်ခညျြနှောငျလှန်လမ်းညွှန်ထဲမှာလာနှင့်သင်သည်သင်၏လေ့လာမှုအချိန်အများဆုံးလုပ်ကိုကူညီသော့ချက်သဘောတရားများကိုအာရုံစိုက်. သငျသညျဘဏ္ဍာရေးတွက်ချက်မှုပေါ်လေ့ကျင့်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်, spreadsheet နှင့်သုတေသနစွမ်းရည်များ.
စမ်းသပ်ခြင်း Bank ၏အခမဲ့စမ်းသပ်
သငျသညျအရ sign up ကိုလို့ရပါတယ် 48 အခမဲ့နာရီ, အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဘဏ်မှန့်အသတ် access ကို. သင်သင်တန်းကျောင်းစာအုပ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုရယူပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေပေမယ့်, သငျသညျသီးခြားစီသို့မဟုတ်သင့်သင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်စမ်းသပ်ဘဏ်ဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
အန်းဒရွိုက်အသုံးပြုသူများအတွက်အဘယ်သူမျှမ app ကို
Wiley ရဲ့စီအိုင်အေစာမေးပွဲအာရုံစိုက်မှတ်စုများဟာ android အခြေစိုက်စမတ်ဖုန်းများသာ Apple က iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်မဟုတ်. ကျနော်တို့က Google အတွက်သူတို့ကိုဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်တစ်ချိန်က Play ကြည့်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ.
Wiley စီအိုင်အေစာမေးပွဲပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုမဆိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းများမပါဘဲတင်းကြပ်စွာအွန်လိုင်းမှသင်တန်းဖြစ်ပါသည်. ကျောင်းသားများဖတ်စာအုပ်များအတွက်ပစ္စည်းကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သူတို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းပေးကြသည်အဖြေပေါ်မှီခိုအားထားရပါလိမ့်မယ်.
Wiley စီအိုင်အေတတ်နိုင်သမျှမေးခှနျးမြားစှာကငျြ့သုံးလိုတဲ့သူအွန်လိုင်းကျောင်းသားများကိုအတှကျအကြိုးများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအချိန်ဇယားအရသိရသည်စာမေးပွဲဖြတ်သန်းသူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်. Wiley စာမေးပွဲအပေါ်သူတို့အားအလားတူဖြစ်ကြောင်းအရည်အသွေးမြင့်မေးခွန်းများကိုများအတွက်လူသိများတဲ့နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေ့အကျင့်အစည်းအဝေးများများအတွက် filtered နိုင်ပါသည်. အဆိုပါထည့်သွင်းပြဌာန်းစာအုပ်နှင့်အာရုံစိုက်မှတ်စုများစာသားမှတဆင့်၎င်းတို့၏လမ်းအလုပ်လုပ်ချင်သူကိုပိုပြီးရိုးရာသင်ယူသူများအတွက်ကြိုဆိုများအပြင်နောက်ထပ်.
iOS မိုဘိုင်း apps များဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းကျောင်းသားများကိုအချိန်မရွေးလေ့လာဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏, သူတို့ရဲ့အဆင်ပြေမှာဘယ်နေရာမှာမဆို. ဒါဟာတာရှည်သွားလာခြင်းနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောသည်နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိန်ကိုကယျတငျနိုငျ.
အင်အားကြီးအရင်းအမြစ်များကော်ပိုရေးရှင်း (PRC) စီအိုင်အေစာမေးပွဲဖြတ်သန်းဘို့ဖြောင့်အမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နေရာလေးကိုသင်တန်းဖြစ်ပါသည်.
ကျယ်ပြန့်အလေ့အကျင့်အစည်းအဝေးများစီအိုင်အေစာမေးပွဲဖြတ်သန်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောများမှာ. PRC ထက်ပိုမိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး 3,700 မေးခွန်းများကို. သငျသညျသငျနှငျ့အတူရုန်းကန်နေကြသောတိကျသောအကြောင်းအရာများပစ်မှတ်ထားနိုင်အောင်မေးခွန်းများကိုကို set up နေကြတယ်.
သငျသညျမသာလုံလောက်သောအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများ, တစ်ခုချင်းစီကိုဖြေကိုမှန်ကန်သို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်စေသည်အဘယ်ကြောင့်ဒါပေမယ့်လည်းအသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်ပါ. ဤသည်အဆောက်အဦအယူအဆအတွက်အလွန်အရေးပါသည်. အခြားသင်တန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုမှကြွလာသောအခါ PRC ကျိန်းသေပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်. သငျသညျမှတ်စုရေးရန်နှင့်အသစ်စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများ compile နိုင်ပါလိမ့်မည်.
PRC က၎င်း၏သုံးသပ်ချက်ကိုသင်တန်းအတွက်အလွန်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါသည်. က pass အာမခံချက်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်. သင်အမှန်တကယ်သင်တန်းအလုပ်လုပ်နှင့်သည်းမထားဘူးဆိုရင်, PRC သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံပြန်အမ်းလိမ့်မယ်. သငျသညျ၎င်းငျး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည် (ထိုကဲ့သို့သောထက်ပိုမိုသွင်းယူအဖြစ် 90% အဆိုပါလှောင်ပြောင်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအပေါ်), ဖြတ်သန်းမဟုတ်များအတွက်ပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်.
အခြားအစီအိုင်အေပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများနှင့်မတူဘဲ, PRC သငျသညျအပြီးအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေတောင်းခံဖို့ option ကိုပေးသည် 30 ရက်ပေါင်း, အဘယ်သူမျှမမေးခှနျးတှေမေးမွနျး! သင်ဤသင်တန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားလျှင်သင့်ရဲ့သင်ယူမှုစတိုင်မကိုက်ညီ, သငျသညျကျောကိုယ်ငွေရဖို့နိုင်တော့မည်နှင့်ပိုကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပါလိမ့်မည်တဲ့သင်တန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်.
ဒီသင်တန်း၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းအညွှန်းလွယ်ကူစေသည်. ဒါဟာအဘယ်သူမျှမ distrations နှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခုထိရောက်လမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး. သင်သင်တန်းမှတဆင့်ပဲ့ထိန်းနေအဖြစ်, သင်ကျောင်းစာအုပ်အဆိုပါ IIA ရဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုအကြမ်းဖျင်း mirror ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲလေ့လာမှုအစည်းအဝေးများသို့ခွဲခြားသိမြင်ပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှု simplifying နေချိန်မှာသင်ကပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်အောင်ပုံစံအလုပ်ဖြစ်တယ်, ကျွမ်းကျင်သောလေ့လာမှုအကြံပေးချက်များနှင့်သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးထောက်ပံ့ဖြတ်သန်းအကြံပေးချက်များကိုကျေးဇူးတင်. တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှု session ရဲ့အဆုံးမှာ, သငျသညျစာသားကိုအတွင်းရှင်းလင်းဥပမာအတူစုံတွဲတစ်တွဲအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုအတူနားလည်မှုသင့်အဆင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါလိမ့်မည်.
သငျသညျပစ္စည်းလေ့လာနေပြီးဆုံးပါပြီပြီးနောက်, လူအပေါင်းတို့သည်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုလေ့ကျင့်, နှင့် e-စာလုံးကတ်နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်, သင်အမှန်တကယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုအပေါ်ပြုကြလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ကောင်းစွာကြည့်ဖို့ယူနှစ်ခုလှောင်ပြောင်စာမေးပွဲရှိတယ်. သင်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ခံစားရနိုင်အောင်ဒါတွေကလှောင်ပြောင်စာမေးပွဲမူရင်းစီအိုင်အေစမ်းသပ်ကဲ့သို့တူညီသော layout ကိုများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ. ဒါဟာအစပြည့်စုံစမ်းသပ်မှုအချိန်ကာလအတွင်းဖိအားအောက်မှာသင့်ရဲ့အသိပညာစမ်းသပ်အတွက်ကူညီပေးသည်.
စီအိုင်အေစာမေးပွဲပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကိုများအတွက်တတ်နိုင်ရွေးချယ်စရာတစ်ဦးအဖြစ်, PRC ဝယ်ယူကုန်ကျစရိတ်သာ $396. သင်သည်အခြားသင်တန်းများရှိလူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်များအရသော်လည်းကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်. များအတွက်သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ယူရန်ကထို option ကိုလည်းရှိပါတယ် $175 အသီးအသီး.
စီအိုင်အေအဘို့အလေ့လာနေတဲ့တစ်ကိုယ်တော်ခရီးဖြစ်ပါသည်, PRC ဒီတော့သင်တစ်ယောက်တည်းဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသင်ဆက်သွယ်ပါရန်အဘို့အသင်တန်းပို့ချရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့်. ဤရွေ့ကားစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကသင့်ရဲ့တိကျတဲ့မေးခွန်းများကိုအတူသင်တို့ကူညီရန်နှင့်သင့်နားလည်မှုပိုမိုနက်ရှိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်.
PRC စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်ယူမှုအတွက်ဗီဒီယိုပို့ချချက်မပေးပါဘူး. သာစာသားကိုသင်ခန်းစာများကိုသင့်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်. ဗီဒီယိုကပို့ချချက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကိုရှာဖွေသူများသည်ကျောင်းသားများကိုကြောင့်ဒီသင်တန်းအတွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တှေ့လိမျ့မညျ.
PRC မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေ့လာချင်သောသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလျောက်ပတ်သည်. self-လှုံ့ဆော်မှုသင်ယူသူပိုပြီးဒီသင်တန်းကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်. ဒီသင်တန်းကိုကျယ်ပြန့်အလေ့အကျင့်အစည်းအဝေးများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.
နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ပါဝါအရင်းအမြစ်မှာ Self-ပွေးညီသင်ယူသူတစ်ခုကျယ်ပြန့်ပစ္စည်းကိုထောက်ပံ့ပေး. ဒီသင်တန်း၏အချက်ဒီဇိုင်းရန်ထိရောက်စီအိုင်အေစမ်းသပ်မှု၏အောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုများအတွက်ခွင့်ပြု. ဒီသင်တန်းကပေးအပ် Pass နှင့်အာမခံချက်လှုံ့ဆော်စမ်းသပ် takers အတွက်လည်းအလွန်အရေးပါသည်.
Hock အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်အဘို့ပြင်ဆင်နေကြသူကျောင်းသားများအတွက်အများအပြားသင်တန်း option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထား. သူတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားမှာအခြေခံကိုဖုံးလွှမ်း, မြေပြင်ကိုတက်နေစေ့စေ့စပ်စပ်သုံးသပ်မှုမလိုအပ်သောသူတို့အဘို့ဒီသင်တန်းကောင်းသောအောင်.
HOCK စီအိုင်အေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်ဖတ်စာအုပ်များအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့နမူနာကမ်းလှမ်း, ကဒ်ပြား, အဆိုပါ ExamSuccess မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို, သင်ကဝယ်ယူရန်မတိုင်မီနှင့်ဗီဒီယိုများကိုသင်သင်တန်းထွက်စစျဆေးနိုငျဒါ. ဒါဟာအတော်ကောင်းတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုသည်နှင့်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်ကိုမလိုအပ်ပါဘူး. အဆိုပါအယူအဆကိုလည်းအခြားအစီအိုင်အေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း offereing နေကြတယ်ဆိုတာကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသည်.
ကျောင်းသားများကိုလည်းအခမဲ့စီအိုင်အေဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကို ယူ. HOCK ရဲ့ဦးဆောင်တစ်ဦးပေါ်သို့ကြိုးစားသူတို့နာရရှိရန်စီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်အဘို့လေ့လာနေအခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်. အဆိုပါဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်, သင်မူကားပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခမဲ့အကောင့်အတွက် register ဖို့ရှိသည်ပါဘူး, နှင့်ဤ feature အသစ်နေဆဲစမ်းသပ်ပြီးခံကြောင်း (beta ကိုဗားရှင်း).
ExamSuccess ဆော့ဝဲ / စီအိုင်အေမေးခွန်းဘဏ်
HOCK ရဲ့ ExamSuccess လေ့လာမှု Software များသင်တန်း၏စီအိုင်အေမေးခွန်းများတစျပိုငျးကိုများတွင်ပါဝင်သည်. အဆိုပါ software ကိုမှန်ကန်နှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးအဖြေမျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းတွေနဲ့ရှင်းလင်းချက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပါဝင်သည်. မေးခွန်းလွှာလေ့လာမှုအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအချိန်ကုန်ဆုံးနေကြခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်များကစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဘာသာရပ်အပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့လေ့လာမှုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်. အသေးစိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်းပေါ်တွင်အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့အဆင့်ကိုပြသ.
မေးခွန်းကဘဏ်တစ်ခုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲအွန်လိုင်းဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါထည့်သွင်းကဲ့ရဲ့စာမေးပွဲလေ့လာမှုပစ္စည်းများအတွက်တခြားနေရာကိုသုံးကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသစ်ကိုမေးခွန်းများကိုပါရှိသည်သတိပြုပါ, ဒါကြောင့်သင်မေးခွန်းများကိုတစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အမှန်တကယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့သင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှန်းနိုင်ပါတယ်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်တန်းအမှတ်စဥ် Options ကို
Hock အများအပြားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသင်တန်းများကမ်းလှမ်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနေရာများတွင်တစ်အရေအတွက်အခြားအုပ်စုများမှ၎င်း၏လေ့လာမှုပစ္စည်းများထောက်ပံ့. နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်သို့မဟုတ်ပြည်ပမှာစီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်အဘို့လေ့လာနေကျွမ်းကျင်သူများ Belorussia အတွက်တိုက်ရိုက် HOCK သင်တန်းတက်သည်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်, ရုရှားနိုင်ငံ, ယူကရိန်း, နှင့်ကာဇက်စတန်, နှင့်အခြားသောနေရာများတွင် HOCK လေ့လာမှုပစ္စည်းများထည့်သွင်းကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကိုရှိ. ပစ္စည်းများရုရှားနှင့်အာရဗီကိုလည်းရရှိနိုင်ပါ. အသေးစိတ် HOCK က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု..
Flash ကိုကတ်များကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆနှင့်လဲ tutorial ကျက်မှတ်၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များမှာ. အဆိုပါအပြန်အလှန်စာလုံးကတ်ကိုသင်တတ်နိုင်သမျှထိထိရောက်ရောက်သတင်းအချက်အလက်သင်ယူကိုကူညီတီထွင်ခဲ့သည်. နယူးကတ်များတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာကြသည်နှင့်စာလုံးကတ်သည်သင်၏အသိပညာတစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ဘာသာရပ်၏ကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်. တင်ပြကြသည်.
HOCK ရဲ့သုံးသပ်မှုသင်တန်းများကိုတစ်ခုမှာအားသာချက်ပစ္စည်းများအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကျောင်းသားများကိုသူတို့ကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်အဖြစ်အသုံးပြုခံရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. တစ်ဦးတည်းသာတစ်နှစ်ရရှိနိုင်ပါသည်သောအခြားစီအိုင်အေသုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ဒါကကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်.
HOCK တစ်ဦးအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာဗီဒီယိုကလဲ tutorial သည်. ဤသည်ထိရောက်သောအမြင်အာရုံလဲ tutorial likes သူကိုသင်ယူသူအဘို့ကြီးသောအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်.
HOCK ရဲ့မေးခှနျးကဘဏ်ထက်ပိုမိုပါဝင်သည် 2,800 မေးခွန်းများကို, သည်အခြားပြိုင်ဘက်မှနှိုင်းယှဉ်သလောက်အရာဖြစ်ပါသည်. တချို့ကမေးခွန်းများကိုလည်းအလွန်ဆင်တူပုံရသည်ဤသို့မလိုအပ်တဲ့ကြည့်ရှု. ထို့ကြောင့်မတူကွဲပြားမှုမရှိခြင်းကအဓိကပြဿနာ woth HOCK စီအိုင်အေပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်ပါသည်.
အဘယ်သူမျှမငွေ Back ကိုအာမခံ
အခြားအစီအိုင်အေမတူဘဲ HOCK အာမခံချက်ပိုက်ဆံပြန်မပေးပါဘူးသုံးသပ်ပြီး. ဒီ feature သို့သော်သူတို့ပေးအခမဲ့နမူနာအားဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာညှိနေသည်.
HOCK သင်သည်သူတို့၏အပြီးအစီး Package ကိုမဝယ်လျှင် Pass နှင့်အာမခံချက်ရှိမ. သငျသညျစီအိုင်အေစာမေးပွဲမထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလျှင်သူတို့ re-ယူစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်သင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုကြေးပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ် (သို့သော်အဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းငွေ). အသေးစိတ်ကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အ HOCK ရဲ့ website ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကျေးဇူးပြု..
Hock စီအိုင်အေပြန်လည်သုံးသပ်အနေနဲ့တတ်နိုင် option ကိုဖြစ်သော်လည်း, သာအနည်းငယ်ပိုပြီးပိုက်ဆံထွက်ရှိပိုကောင်းအစီအစဉ်များရှိပါတယ်. မေးခွန်းများကိုများ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်နိမ့်သည်. သို့သော်ဗီဒီယိုလဲ tutorial အချို့သောကျောင်းသားများကိုအဘို့ကြီးသောအကူအညီနဲ့များမှာ. အပြီးအစီးအထုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်လောလောဆယ်တွင် $649 အစား $814.
စီအိုင်အေသင်ယူ System ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
စီအိုင်အေသင်ယူ System ကိုပြည်တွင်းစာရင်းစစ်ချုပ်၏ Institute ကကတီထွင်တရားဝင်လေ့လာမှုပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် (IIA). အဆိုပါ IIA ရဲ့စီအိုင်အေသင်ယူ System ကို Self-လေ့လာမှုသင်တန်းပုံနှိပ်နှင့် e-စာအုပ်စာဖတ်ခြင်းပစ္စည်းများပါဝင်သည်, အပြန်အလှန်အွန်လိုင်းပစ္စည်း, နှင့်တိုက်ရိုက်၏ထို option, နည်းပြဆရာဦးဆောင်သောသင်တန်းများ. အပြည့်အဝကိရိယာအစုံစာမေးပွဲအပေါငျးတို့သညျသုံးဖွာဖုံးလွှမ်း, သို့မဟုတ်သင်တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းများအတွက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နိုင်ပါတယ်.
နှစ်နှစ်ရရှိနိုင်အဆိုပါ Self-လေ့လာမှုဒီဇိုင်းသင်တန်းကျောင်းသားအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်လုံလောက်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေး. သည်အခြားပြိုင်ဘက်များအနေဖြင့်တစ်နှစ်မှနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ဝယ်ယူပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုများနှင့်သင်တန်းပစ္စည်းရန်လက်လှမ်းနှစ်ယောက်ရရှိနိုင်.
အွန်လိုင်းလေ့လာ Tools များ
interactive အွန်လိုင်း tools တွေကိုအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုနှင့်စမ်းသပ်မှုများပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်စိတ်ကြိုက်လေ့လာမှုအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူအောင်. သင်သည်သင်၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ်အဖြေရှာတဲ့ Pre-စမ်းသပ်မှုယူ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့လေ့လာမှုအစီအစဉ် layout ဖို့ရန် SmartStudy အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများကိုတစ်ဦးချင်းစီအခနျးတှငျလိုကျနာ, နှင့် Post-စမ်းသပ်မှုသင်ပစ္စည်းအားလုံးဖုံးလွှမ်းတော့တခါသငျသညျထိန်းသိမ်းထားပါပြီဘယ်လောက်သတင်းအချက်အလက်ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီ. ငါးဖတ်စာအုပ်များသင်စာမေးပွဲဖြေဆိုအပေါငျးတို့သညျသုံးဖွာအဘို့ကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုဖုံးလွှမ်း.
တစ်နည်းပြဆရာကသင်ကြားပိုရိုးရာစာသင်ခန်းစတိုင်သင်ကြားမှုကိုပိုနှစ်သက်သူကိုကျောင်းသားများအတွက်, အွန်လိုင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမျိုးစုံနေရာများတွင်ပူဇော်ကြသည်. ဤသင်တန်းများထဲကအတော်များများလည်းအားလုံးအွန်လိုင်းမှလေ့လာမှုပစ္စည်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်များပါဝင်.
စီအိုင်အေသင်ယူမှုစနစ်ကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုတစ်ဦးအခမဲ့သရုပ်ပြပေးသည်. သို့သော်သရုပ်ပြန့်အသတ်ဖြစ်ပါသည်. သရုပ်ပြဖို့လက်လှမ်းလိုသူကိုယ်စားလှယ်လောင်း access ကိုရဖို့ရန်တိုတောင်းတဲ့စစ်တမ်းဖြည့်ရန်ရှိသည်.
သင်သည်သင်၏တိုးတက်မှုအပေါ်အချို့သောတုံ့ပြန်ချက်ရနိုင်ပေမယ့်, ဒီသင်ယူသူ-သပ္ပါယ်စတိုင်သင်တန်းမဟုတ်ပါဘူး: စမ်းသပ်မှု taker မှပေးအပ်မေးခွန်းများကိုသူ / သူမ၏အားနည်းချက်များကိုသို့မဟုတ်အားသာချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ကြိုက်ကြသည်မဟုတ်. ဒီအသပ္ပါယ်မဟုတ်ထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဘဏ်များ၏အလွန်ရေနံစိမ်းပုံစံဖြစ်ပါသည်.
စီအိုင်အေသင်ယူ System ကိုစျေးကွက်အပေါ်စျေးအကြီးဆုံးသင်တန်းများတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါကန့်သတ်မဟုတ်တဲ့သပ္ပါယ် features တွေပြိုင်ဘက်မှနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ကပိုပြီးအကုန်အကျကြည့်ရှုစေ.
ဒီသင်တန်းဟာပြဌာန်းစာအုပ်အတွက်အချက်အလက်များ၏ဖွဲ့စည်းနေသည်, အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေက, သာနှင့်အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ. အတူရရှိနိုင်ပါသည်မျှသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဒီသင်တန်းအတွက်ရှိပါသည်.
အဆိုပါစာအုပျပစ္စည်းများစာမေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်, အွန်လိုင်း tools တွေကို IIA ရဲ့ပြိုင်ဘက်အများအပြားကကမ်းလှမ်းများထက်လျော့နည်းအထင်ကြီးကြသည်. စီအိုင်အေသင်ယူစနစ်၏ဆုံးနှစျသိမျ့သှငျအပွငျကပြည်တွင်းစာရင်းစစ်ချုပ်၏ Institute ကကဒီဇိုင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည် (IIA), ဒါကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသူတို့သင်ယူနေသောပစ္စည်းစာမေးပွဲအပေါ်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ကားအဘယ်သို့ယုံကြည်စိတ်ချခံစားရနိုင်ပါတယ်.
သို့သော်မြင့်မားကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ၎င်း၏လျော့နည်းပြီးပြည့်စုံသောသဘာဝစီအိုင်အေပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန်လျော့နည်းစံပြစေသည်. အသုံးပြုသောအဟောင်းကျောင်းကိုနည်းစနစ်အသစ်များကိုစမ်းသပ် takers ထိုသို့လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုစေသည်.
အကောင်းဆုံး CAPM့Prep သင်တန်းအမှတ်စဥ် & လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
အကောင်းဆုံး PMI-ACP့Prep သင်တန်းအမှတ်စဥ် & လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
အကောင်းဆုံး PMP့Prep သင်တန်းအမှတ်စဥ် & လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
© မူပိုင် - အဆိုပါ InfoSec စာမေးပွဲတွင် Crush - Kriesi အားဖြင့်အဓိကအကြောင်းအရာ Enfold
CISA လစာ: ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ရယူနိုင်သောနိုင်သလား?
CISM အလုပ်ရှာဖွေရေးနှိုင်းယှဉ် vs CIA က vs CISSP vs CISA